Kedu ihe inyeaka dị mkpa maka ụlọ ahịa plastik azụmahịa-News-Topflor China nwere oke
Echiche:63 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-01-26 Mmalite: Saịtị
Azụ ahịa plastik a na-ere ere bụ ihe eji ewu ewu taa. Ọ bụ gburugburu ebe obibi enyi, na-enweghị amị amị, na-eyi na-eguzogide, fechaa, mfe ọcha, na ala na ụkwụ. A na-ejikarị ya ebe ọgwụ, ebe agụmakwụkwọ, ebe ezumike nká, ebe ọfịs, ebe azụmahịa, wdg. Ya mere, ihe inyeaka ihe dị mkpa maka paving?
1 interface gị n'ụlọnga
Ọ bụ ihe mmiri mmiri ma a ga-eji ya maka ịkpụzi onwe ya. Emulsion interface ọgwụgwọ gị n'ụlọnga, eji maka primer nke absorbent bases dị ka ihe, ciment ngwa agha, na anhydrite bases na mgbidi na ala, ya bụ, na-emechi capillaries na gaps nke isi iji belata porosity The absorption nke isi oyi akwa; n'otu oge ahụ, ọ na - eme ka njikọta njikọta nke isi ntọala wee rụọ ọrụ dị ka akwa ijikọ; ndị isi oyi akwa mgbe primer nwere ike ịbụ onwe-leveling na leveling ewu.
2 Senti na-edozi onwe ya
Ọ bụ ihe a na-edozi nke ọma na oke mmiri dị mma. Enwere ike iji ya maka ntọala dị iche iche na enweghị ntụpọ na-adịghị mma, enwere ike iji ya na ala marble na tile tile. Mee ngwa ngwa na akpaghị aka na-edozi ala, ntọala ngwa ngwa, obere ịda mbà; njikwa n'efu nke owuwu ụlọ; ọkpụrụkpụ ụlọ nke 2-4mm; echekwa na ego. Ebe ọ bụ na ala PVC na-achọ ọkwa dị elu nke pavụị, a na-achọkarị ịhazi onwe gị na ụlọ nkịtị.
3 eriri igwe gluu
Ọ bụ ihe nrapado maka njikọta na ala nke eriri igwe, nrapado nke mmiri na-arụ ọrụ nke ọma, nke kwesịrị ekwesị maka ịrapagidesi ike ụdị PVC niile na ala mpempe akwụkwọ, PVC kapeeti na-akwado ya, wdg.
4 waya waya bonding
Gbado ọkụ waya bụ a ihe na-ejikọ ndị gaps na ịkwanyere eriri igwe n'ala. Oghere ndị ahụ agbakọtara ọnụ iji mepụta dum, nke na - abụghị naanị mma, kamakwa ọ na - egbochi olulu mmiri na uto nje.